CO2 loogu talagalay aquariums -yada, maxaa loogu talagalay iyo sababta ay lagama maarmaanka u tahay? | Ee kalluunka
CO2 loogu talagalay aquariums -ka waa mowduuc leh jajab badan waxaana kaliya lagula talinayaa kuwa biyo -doonka ugu baahida badan, tan iyo markii lagu daray CO2 aquarium -ku waxay saamayn ku yeelan kartaa oo kaliya dhirteena (si ka sii wanaagsan ama ka sii xun) laakiin sidoo kale kalluunka.
Maqaalkan waxaan si qoto dheer uga hadli doonaa waxa CO2 u yahay aquariums -ka, sidee yihiin xirmooyinka, sida loo xisaabiyo xaddiga CO2 ee aan u baahan nahay ... CO2 guriga lagu sameeyo oo loogu talagalay Aquariums -ka.
1 Waa maxay CO2 loogu talagalay aquariums -ka
2 Sidee yihiin xirmooyinka quraaradda CO2
2.1 Waxyaabaha ku jira xirmada
3 Mudo intee leeg ayay dhalada CO2 ee aquariums -ku soconaysaa?
4 Sida loo cabbiro xaddiga CO2 ee ku jira quraaradda
4.1 Habka gacanta
4.2 Habka otomaatiga ah
6 Ma jiraa beddel loogu talagalay CO2 oo ku jira quraaradaha?
Waa maxay CO2 loogu talagalay aquariums -ka
CO2 waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah aquariums -ka la beeray, mar haddii la’aantood dhirtaadu dhiman lahayd ama, ugu yaraan, ay xanuunsan lahayd. Waa cunsur lagama maarmaan ah oo loo adeegsado photosynthesis, xilligaas oo CO2 lagu daro biyo iyo iftiinka qorraxda si uu geedka u koro. Dib -u -soo -noqoshada, waxay soo saartaa oksijiin, oo ah cunsur kale oo aasaasi ah si loo hubiyo badbaadada iyo caafimaadka wanaagsan ee quraaraddaada.
Jawiga macmalka ah sida aquarium -ka, waa inaan siinnaa dhirtayada nafaqooyinka ay u baahan yihiin ama si sax ah uma hormarin doonaan. Sababtaas awgeed, CO2, oo dhirta dabiiciga ah caadiyan ka hesho dhoobada ciidda iyo dhirta kale ee burbura, ma aha cunsur ku badan aquariums -ka.
Sideen ku ogaan karnaa haddii quraaradeennu u baahan tahay CO2? Sida aan hoos ku arki doonno, waxay aad ugu xidhan tahay inta iftiin ee quraaradu hesho: iftiin badan, in ka badan CO2 ayaa dhirtaadu u baahan doontaa.
Sidee yihiin xirmooyinka quraaradda CO2
Waxaa jira dhowr siyaabood oo CO2 loogu soo gelin karo biyahaaga quraaradda ah. In kasta oo ay jiraan dhowr siyaabood oo fudud, oo aan gadaal ka hadli doonno, waxa ugu wax -ku -oolsan waa in la helo xirmo si joogto ah ugu daraya kaarboonka biyaha.
Waxyaabaha ku jira xirmada
Xirmada Fluval Co2 Kit ...
Xidhmada CO2 Fluval ...
Shaki la'aan, ikhtiyaarka ugu badan ee ay ku taliyaan aquarists -ku waa xirmooyinka CO2, kuwaas oo si joogto ah u soo saaraya gaaskan, si ay suurtogal u noqoto in si hufan loo qiyaaso inta CO2 soo gasho quraaradda, waa wax dhirtaada iyo kalluunkaagu qaddarin doonaan. Kooxahan ayaa ka kooban:
Dhalada CO2. Waa sida saxda ah, dhalo uu gaasku ku jiro. Markii uu weynaado, wuu sii dheeraanayaa (macquul). Marka la dhammeeyo, waa in la buuxiyaa, tusaale ahaan, iyadoo leh dhululubo CO2. Dukaamada qaarkood ayaa waliba ku siiya adeegan.
Xeer -ilaaliye. Jaangooyuhu wuxuu u adeegaa, sida magaciisu tilmaamayo, inuu habeeyo cadaadiska dhalada meesha CO2 ay tahay, yacnii, hoos u dhig si ay u noqoto mid la maareyn karo.
Diffuser Faafiyaha ayaa “jabiya” goobooyinka CO2 wax yar ka hor inta aysan gelin quraaradda ilaa ay ka dhigaan ceeryaamo aad u fiican, sidaa darteedna si fiican loogu qaybiyey quraaradda oo dhan. Waxaa si weyn laguugula talinayaa inaad ku dhejiso gabalkan biyaha nadiifta ah ee shaandhaynta, kaas oo ku fidin doona CO2 dhammaan quraaradda.
Tuubo u adkaysta CO2. Tuubadani waxay isku xireysaa jaangooyaha iyo faafiyaha, in kasta oo aysan u muuqan mid muhiim ah, dhab ahaantii waa muhiim, mana isticmaali kartid midna, maadaama ay tahay inaad hubiso inuu yahay CO2 u adkaysta.
Solenoid. Ka sokow lahaanshaha magac aad u qabow oo la wadaagaya cinwaanka riwaayad Mircea Cartarescu, solenoids -ku waa aalado aad u faa'iido badan, maadaama ay mas'uul ka yihiin xiritaanka waalka u banneeya CO2 marka aysan jirin saacado iftiin (at dhirta habeenkii uma baahna CO2 maadaama aysan photosynthesize samayn). Waxay u baahan yihiin saacad ay ku shaqeeyaan. Mararka qaarkood solenoids -ka (ama saacadaha iyaga) kuma jiraan xirmooyinka quraaradda CO2, marka waxaa aad loogu talinayaa inaad hubiso inay ku jiraan haddii aad danaynayso inaad mid leedahay.
Miiska xumbo. In kasta oo aysan muhiim ahayn, waxay kuu oggolaaneysaa inaad xakameyso xaddiga CO2 ee soo gala quraaradda si wax ku ool ah, maadaama ay sidaas sameyso, tirinta xumbada.
Hubiyaha faleebo. Dhalada noocan ah, oo aan sidoo kale lagu darin xirmooyinka qaarkood, hubinaysa oo tilmaamaysa xaddiga CO2 ee ku jira quraaradda -biyahaagu. Badankoodu waxay leeyihiin dareere midabkiisa beddelaya taas oo ku xidhan hadday fiirsigu hooseeyo, sax yahay, ama sarreeyo.
Mudo intee leeg ayay dhalada CO2 ee aquariums -ku soconaysaa?
Runtu waa taas xoogaa way adag tahay in si dhab ah loo sheego inta dhalada CO2 ay socoto, maadaama ay ku xirnaan doonto xaddiga aad ku shubtay quraaradda, iyo weliba inta jeer, awoodda ... si kastaba ha ahaatee, waxaa loo tixgeliyaa in dhalo qiyaastii laba litir ah ay socon karto inta u dhexeysa laba illaa shan bilood.
Sida loo cabbiro xaddiga CO2 ee ku jira quraaradda
Runtu waa taas ma sahlana haba yaraatee in la xisaabiyo boqolleyda CO2 ee ay u baahan tahay quraaradeenamaadaama ay ku xiran tahay dhowr arrimood. Nasiib wanaag, sayniska iyo farsamada ayaa jira si ay xabadka xabadka uga saaraan mar labaad. Si kastaba ha ahaatee, si aan fikrad kuu siino, waxaan ka hadli doonaa labada hab.
Marka hore, waxaan ku bari doonnaa habka gacanta si aad u xisaabiso inta CO2 u baahan tahay aquarium -kaaga. Xusuusnow, sidaan hore u sheegnay, saamiga loo baahan yahay wuxuu ku xirnaan doonaa dhowr arrimood, tusaale ahaan, awoodda quraaradda, tirada dhirta aad beeratay, biyaha la farsameeyo ...
Primero waa inaad xisaabisaa pH iyo adkaanta biyaha si aad u ogaato boqolkiiba CO2 taasi waxay ku jirtaa biyaha quraaraddaada. Sidan ayaad ku ogaan doontaa boqolkiiba CO2 ee aad u baahan tahay quraaradda. Waxaad ka heli kartaa tijaabooyin si aad ugu xisaabiso qiimayaashan dukaamada khaaska ah. Waxaa lagu talinayaa in boqolkiiba CO2 ay u dhexeyso 20-25 ml halkii litir.
Markaa waa inaad ku dartaa CO2 oo ay u baahan tahay biyaha quraaradda (Haddii kiisku dhaco, dabcan). Si aad tan u samayso, xisaabi in ay jiraan ilaa toban goobooyin CO2 daqiiqaddiiba 100 litir oo biyo ah.
Habka otomaatiga ah
Shaki la'aan, kani waa habka ugu raaxada badan ee lagu xisaabiyo in xaddiga CO2 ee ku jira quraaraddayada uu sax yahay iyo in kale. Si taas loo sameeyo waxaan u baahan doonaa tijaabiye, nooc ka mid ah dhalada galaaska (oo ku lifaaqan koob nuugid oo u samaysan sida gambaleel ama xumbo) oo leh dareere gudaha ku jira oo adeegsanaya midabyo kala duwan si ay uga warbixiyaan xaddiga CO2 ee biyaha ku jira. Caadi ahaan midabada lagu tilmaamayo tan had iyo jeer waa isku mid: buluug heer hoose ah, jaale heer sare ah iyo cagaar heer ku habboon.
Qaar ka mid ah tijaabooyinkan ayaa ku weydiin doona inaad ku qasto biyaha quraaradda xalka, halka kuwa kale aysan daruuri noqon doonin Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer raac tilmaamaha soo -saaraha si aad uga fogaato cabsida.
Arrinta CO2 ee aquariums -ka waa mid aad u dhib badan, maadaama wuxuu u baahan yahay dulqaad, xirmo wanaagsan iyo xitaa nasiib badan. Taasi waa sababta aan u diyaarinay liis talooyin ah oo aad ku xisaabtami karto markaad soo gasho adduunkan:
Waligaa ha gelin CO2 badan hal mar. Aad bay u fiicantahay inaad si tartiib tartiib ah u bilowdo oo aad u dhisto heerarka kaarboonkaaga wax yar, ilaa aad ka gaarto boqolkiiba la rabay.
Ogow taas, kolba inta ay biyuhu dhaqaaqaan (tusaale ahaan shaandhaynta) inta badan CO2 ayaad u baahan doontaa, maadaama ay ka dhaqaaqi doonto biyaha quraaradda ka hor.
Hubaashii waa inaad dhowr tijaabo ku samaysaa biyaha ku jira quraaraddaada ilaa aad ka hesho saamiga ugu habboon CO2 midkan. Sidaa darteed, waxaa aad loogu talinayaa inaad samayso baadhitaanadan adiga oo aan weli wax kalluun ahi jirin, markaa waxaad iska ilaalin doontaa inaad khatar geliso.
Ugu dambeyntii, haddii aad rabto inaad kaydiso CO2 yar, dami nidaamka saacad ka hor inta aan laydhku bakhtiyin ama uu madoobaado, waxaa kuu soo hadhi doona dhir kugu filan oo aanad khasaarin.
Ma jiraa beddel loogu talagalay CO2 oo ku jira quraaradaha?
Sidaan horay u sheegnay, ikhtiyaarka xirmooyinka si loo sameeyo CO2 macmal ah ayaa ah waxa ugu habboon dhirta ku jirta quraaraddaada, si kastaba ha ahaatee, oo ah ikhtiyaar qaali ah oo adag, mar walba kuma habboona qof walba. Beddel ahaan, waxaan heli karnaa cabitaanno iyo kiniinno:
Habka ugu fudud ee CO2 loogu daro quraaraddaada waa u sameeya hab dareere ah. Dhalooyinka leh badeecadani waxay ka kooban yihiin uun, qaddar kaarboon (oo sida caadiga ah lagu cabbiro daboolka dhalada) oo ah qaab dareere ah oo ay tahay inaad ku darto biyahaaga quraaradda waqti ka waqti. Si kastaba ha ahaatee, ma aha hab aad u badbaado badan, maadaama uruurinta CO2, inkasta oo ay biyaha ku milmayso, mararka qaarkood si siman uma fiddo. Intaa waxaa dheer, waxaa jira kuwa sheegta inay waxyeello u geysatay kalluunkooda.
Kiniinnadu waxay kaloo u baahnaan karaan qalab gooni ah, maadaama, haddii si toos ah loogu shubo quraaradda, ay kala tagaan daqiiqad halkii ay wax yar ka qaban lahaayeen, si aysan gebi ahaanba waxtar ugu lahayn dhirta oo ay uga tagaan dheecaanno sii jiri kara inta. maalmo gadaal ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira ikhtiyaarro fudud oo badeecada si fudud loogu sameeyo biyosi kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u furfurin.
Aquarium CO2 waa maado adag oo u baahan xirmooyin iyo xitaa xisaab si loo helo saamiga ugu habboon iyo in dhirteenu ku korto caafimaad buuxa. Noo sheeg, ma leedahay quraarad lagu beeray? Maxaad ku samaysaa kiisaskan? Miyaad ka badan tahay taageereyaasha koronto -dhaliyaha CO2 ee guriga lagu sameeyo ama miyaad doorbideysaa dareere ama kiniinno?
Fuentes: Beerta Aquarium, dennerle
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » CO2 loogu talagalay aquariums -ka
6 fikradood oo lagu qurxiyo quraaradda